Insights kubva kuunCommission Stories - The unCommission
Insights kubva kuunCommission Stories
Vanopfuura vechidiki mazana mashanu munyika yose vakagovana ruzivo rwavo nesainzi, tekinoroji, uinjiniya, uye kudzidza kwemasvomhu kuburikidza neUnCommission, vachipa zviitiko zvavo zvekuda kuziva, mufaro, uye mafaro, pamwe nekutyisidzirwa, kusakendenga, uye rusarura. Idzi nyaya dzinojekesa kusaenzana uye matambudziko ehurongwa hwedzidzo ukuwo dzichinongedzera kunzvimbo dzetariro. Kubva kwavari, tiri kuburitsa madingindira uye mapatani anozotungamira kutariswa kwezvinangwa zveramangwana reSTEM kudzidza nemukana.
Nhasi tinofara kugovera pfungwa gumi nembiri dziri kubuda kubva munyaya idzi, dzakaiswa mumadingindira mana, pamwe chete nemitsara yemifananidzo inotunhidzwa nenjere idzi. (Simburudza kusvika kunoperera positi kuti uone mifananidzo iyi muhukuru hwakazara.) Artist Tamba Steinberg akagoverana: "Ndakasarudza dimikira remutambo-wekutamba kuti umiririre madingindira makuru ari kubuda kubva kubasa reUnCommission. Rwendo rwemudzidzi wega wega rwakasiyana, uye mukana unotamba chikamu chikuru mumhedzisiro yavo, asi pakupera kwezuva, munda uchiri. Chii chaizoitika kana vatambi vacho pachavo vakaita mitemo? Ko kana STEM dzidzo yakanangana nezviitiko zvevadzidzi?"
Dzidza zvakawanda pamusoro pemuono wega wega uye nezvatakanzwa kubva kune vatauri vengano pano. Mumavhiki anotevera, tichave tichigovana mamwe nuance pane aya maonero.
Manzwisisiro Akapoteredza Manzwiro eMutauri weNyaya
Maonero 1: Kuti vabudirire, vadzidzi vanofanirwa kuve nepfungwa yekuve vekwavo uye nekubatanidzwa pavanenge vachifambisa zviitiko zveSTEM.
Maonero 2: Kune vamwe vadzidzi, zviitiko zveSTEM zvakazadzwa nemhando dzakasiyana dzemanzwiro akanaka anosanganisira kufara, manyawi, kufara, uye kudada, uye manzwiro aya akaita mutsauko mumaonero aiita vadzidzi STEM nenzendo dzavo dzekudzidza STEM.
Maonero 3: Kune vamwe vadzidzi, manzwiro ekuvhiringidzika, kushushikana, uye kusuwa kwakadzora zviitiko zvavo zvekirasi yeSTEM. Mamiriro makuru ekudzidza mukirasi, izvo zvinopfuura kungotarisa pane zviri mukati, zvakaita basa rakakosha munzendo dzevadzidzi dzeSTEM. Kusimba kwemanzwiro asina kunaka evadzidzi kwakakanganisa kutenda kwavo mukukwanisa kwavo kubudirira sevadzidzi veSTEM.
Pamwe mugiredhi rechitatu kana rechina ndakangorovha zuva rainyanya kukosha, uye handina kukwanisa kudzoka kubva pane izvozvo kana kugadzirisa zuva riya randakarovha. Zvaiita sekunge ndanga ndichingorasikirwa nechidimbu cheruzivo, uye handina kumboita, handina kumbofunga nezvazvo.
Maonero Akapoteredza Chiitiko cheKirasi
Maonero 4: Apo vadzidzisi vanokudziridza hukama hunotsigira nevadzidzi hunopfuura murairo, vadzidzi vanonzwa vachionekwa nekunzwiwa, kwete sevadzidzi chete, asi sevanhu.
Maonero 5: Vadzidzisi vanoratidza kuda kwavo STEM manyuko ekukurudzira vadzidzi vavo.
Maonero 6: Vadzidzi vanonzwa kunakidzwa uye kuda kuziva apo vadzidzisi vanoshandisa zvakasiyana-siyana zvekudyidzana STEM rairo.
Maonero 7. Kudyidzana STEM mapurojekiti anogona kuzara nekunetsana kana kuzadzwa nekunakidzwa.
Ndakasvika grade 11 ne12 ndipo pandakazowana teacher aiita mawoko aya, like engineering projects for us...we did a final project where instead of like, having a test...takaita aa project kwawaizoda. gadzira trebuchet...kurova mudzidzisi wedu kumeso nemapai madiki nezvimwe. Uye izvo zvakanyanyoita kuti ndiwedzere kufarira izvozvo, iyo engineering bit ... ndichiona zvakadaro, chaiyo inoshanda masvomhu kekutanga ... kune 16 makore ekuzvarwa aive emhando yepfungwa ... vadzidzisi vakandiudza .. ., 'Aa, uchashandisa masvomhu…' asi handina kumbobvira ndazvinzwisisa…
Maonero Akapoteredza Mutauri weNhau Background/Identity
Maonero 8: Vadzidzi vazhinji vechikadzi vanosangana nebonde mumakirasi eSTEM. Kune vamwe vakadzi, izvi zvinoita kuti vawedzere kusimba uye kusimbaradzwa sezvavanopikisa zvinotarisirwa netsika nemagariro zvagara zviripo. Kune vamwe, zviitiko izvi zvinokanganisa kukosha kwavo.
Maonero 9: Vadzidzi vazhinji vanoona rusaruraganda mumakirasi eSTEM. Izvi zvine simba guru pavari zvose mupfungwa nemudzidzo.
Maonero 10: Vabereki/vachengeti vane mazinga akasiyana ehunyanzvi muSTEM anokanganisa nzendo dzevadzidzi dzeSTEM. Vadzidzi dzimwe nguva vanoti izvi zvinoenderana nekusiyana kwetsika mumadzidzisirwo anoita STEM.
Ganda rangu rebrown uye nhaka yeBrazil zvakavhiringidza vandinodzidza navo uye zvakashatirisa vadzidzisi vangu, zvichiita kuti ndive chipfuro chekusekwa nevezera rangu nevadzidzisi zvakafanana. Mudzidzisi wangu wegiredhi rechipiri akava nepesvedzero huru pandiri. Akanditumira kuti ndiedze Chirungu seMutauro weChipiri kunyangwe ndakaita sekuti Chirungu chaive rurimi rwaamai, zvakandimanikidza kuti ndigare panguva yekuzorora uye kunonoka kubva kuchikoro kwakapera "kudzidzirazve" kubata penzura, ndokumaka mhinduro dzangu. sezvisirizvo pabasa rangu rechikoro remasvomhu kunyangwe pandakanyora mhinduro chaiyo.
Insights Around STEM Kufarira
Maonero 11: Zviitiko zvehudiki zvakadai sekusangana nenyika yechisikigo, kuyedza, kutamba nematoyi, uye kuita matambudziko anonetsa esvomhu zvinoita kuti vamwe vadzidzi vade kufarira STEM. Nekudaro, kuratidzwa hakuregi kuunza kufarira kune vese vadzidzi.
Maonero 12: Vadzidzi vanosarudza kuita STEM mabasa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Kune vamwe, inzira yekudzosera, uye kune vamwe, inzira yekuenderera mberi nechishuwo uye rudo rwe STEM muhupenyu hwavo hwese.
Ndakatanga kuunzwa kuSTEM sezvo ndainakidzwa nezvitima zvaThomas & Shamwari uye ndaida kuzove kondakita weMTA pazera remakore manomwe. Ipapo, sezvandakatanga kudzidza kuwedzera, kubvisa, kupatsanura, kuwanda, uye nhamba mumazuva angu echikoro chepuraimari, ndakavamba kuva nechido chesvomhu.
Saizi yakazara mifananidzo: